डा. अरूणा उप्रेती काठमाडौं, ३ माघ
केही वर्षअघि मुगु पुग्दा रारा तालनजिकै बस्ने र निकुन्जको हेरविचार गर्ने एक कर्मचारीको घरमा बस्ने अवसर जुर्‍याे । उनका पाँच छोराछोरी सबै कुपोषणबाट ग्रस्त थिए ।
कुपोषण गरिबीको कारणले भन्दा पनि अज्ञानताको कारणले थियो । अज्ञानताभन्दा पनि खाद्य संघ र सरकारले कर्णालीका जनताप्रति ‘चामल कोचाउने काम को कारणले थियो ।
मुगुमा फल्ने कोदो, फापर, मकै र आलुलाई चाहिँ खाद्यपदार्थ नै नमानेर, ‘खाना भनेको नै चामल हो भनेर’ त्यहाँका जनतालाई घोकाइएको छ ।
नेपालगन्जबाट चामल लगेर तथा कथित् खाद्य संस्थान भनाउँदो संयन्त्रले सस्तोमा ‘ठूलो मान्छेले खाने चामल, काठमाडौंका जनताले खाने चामल बाँड्न’ थालेपछि मुगु, जुम्ला, बझाङलगायतका जनताले किन रोपून् फापर ? किन खाऊन् कोदो ?
हात बाँधेर बसीबसी चामल खान पाइने ठाउँमा किन मेहनत गर्ने ? भन्ने बानी पारिदिएको छ काठमाडौंको प्लानिङ कमिसनले । यो ‘भात खाने र कोदो र फापर नफलाउने’ दिर्घकालीन रोग पञ्चायतदेखि चलिआएको छ ।
यो रोग मेटाउन जस्तोसुकै ‘राम्रो डाक्टर अर्थात् सरकार’ आए पनि कसैले निराकरण गर्न चाहँदैनन् । खाद्य असुरक्षा भएको ठाउँमा चामल पठाउने होइन, स्थानीय कोदो, फापर, मकै, आलु नै फलाउन जोड गर्नुपर्छ । अनि मात्र जनतालाई भोकबाट बचाउन सकिन्छ । तर यसाे गर्नेबित्तिकै अलोकप्रिय भइहालिन्छ । त्यसैले किन यस्तो उपचार गर्न तम्सिनु त भनेर सरकार चुप छ ।
सरकारले ‘१५–२० करोडको ढुवानी खर्च दिन सकिन्छ भने चामल पठाऊ, टाउको नदुखाऊ’ भन्ने ‘प्लान’ गर्छ । यो विषयमा स्वास्थ्य विशेषज्ञ अशोक भुर्तेलले मलाई इमेलमा लेखेका थिए– कर्णालीमा भातै खुवाउने कार्यको पछाडि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कर्मचारीहरूको एउटा गिरोह छ, जसले चामल नदिए जनता भोकै हुन्छन् भन्ने खराब भावना भरिदिएको छ ।
नेपालमा खाद्य तथा कथित् असुरक्षा भएको कारणले अर्थात् असुरक्षा देखाइएका कारणले नै कति अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको त्यहाँ लामो बसाइ हुन सम्भव भएको छ ।
नेपालमा साँच्ची नै के खाद्यान्नको अभाव छ त भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ– खाद्यान्नको अभाव होइन, भएका खानेकुरालाई खाद्यान्न नमानेर, स्थानीयस्तरमा फल्ने पोषणयुक्त खानेकुरालाई प्रयोग नगरेर, चामल नै खानुपर्छ भन्ने भावनाले गर्दा खाद्य असुरक्षा देखिएको हो ।
चामल पठाउने कार्यले हुम्लाको ८ हजार ६ सय १५ हेक्टरजति खेतीयोग्य जमिनमा काम गर्न छोडेर प्लेनमा आउने चामलको आशा गर्छन् त्यहाँका जनता ।
यो विषयलाई लिएर कतिपय मिडियाले लेख्छन्– कर्णाली क्षेत्रलगायत पहाडी जिल्लामा खाद्य संस्थानले नै खाद्य संकट निम्त्याएको छ । तर, खोई त नेपाल सरकारका विशेषज्ञ र विश्व खाद्यान्न संघलाई हामीले औंला ठड्याएर पहाडी जिल्लामा स्थानीयस्तरमा फल्ने कोदो र फापरलाई नै उब्जाउन मद्दत गर भनेको ?
नेपाल सरकार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निकालेको सानो पुस्तिकामा सुन्दर ढंगले लेखिएको छ– नेपालका पहाडी एवं हिमाली भेगहरूमा फापरको खेती गरिन्छ...... । अन्य दुर्गम पहाडी एवं हिमाली भेगहरूमा पनि फापरको खेती गरिन्छ .... । अन्य दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा पनि फापरको उपभोग मुख्य आहारको रूपमा गरिन्छ ।
कृषि मन्त्रालयले लेखेको यो कुरा ठूला भनिएका अफिससम्म पुग्नै भ्याएको छैन । त्यसैले मुख्य आहार फापरलाई विस्थापित गरेर चामल नै ढुवानी गरेको छ सरकारले ।
प्रति १ सय ग्राम फापरमा १३.२५ ग्राम प्रोटिन पाइन्छ । कुपोषणबाट बचाउन फापरको प्रयोग नगरेर ढुवानी गरेको चामल नै किन प्रयोग गराउन खोजेको होला याे संस्थानले ?
जसरी ठूलाठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गाउँमा पाइने दही र मोहीलाई विस्थापित गरेर ‘ठण्डा, चिसाे’ खाऊँ भनेर विज्ञापन गरेपछि अछामको दुर्गम भागमा पनि दही र मोहीको सट्टा महँगो चिसाे पेय पदार्थ खान थालियो । त्यसरी नै दैलेखदेखि मुगुुसम्म नै अन्य अन्न र खाद्य छोडेर चामल खाने बानी लगाइएको छ । र यो नै हो खाद्य असुरक्षाको मूल कारण ।
मुगुमा जाँदा मैले वृषबहादुरलाई कोदो र फापरको ढिँडो पकाउने जमर्को गरौं न भने । उनको जवाफले म छक्क परें । उनले भनिदिए– आजकल कोदो र फापर खोज्न कताकाे जानु ? सदरमुकाम गमगढी गयो, चामल ल्यायो, खायो । किन फापर उमार्ने दुःख गर्नु ? तपाईंले भनिहाल्नुभयो, भोलि गाउँबाट खोजेर ल्याइदिऊँला ।
कुपोषित भएका उनका छोराछोरीलाई देखेर मैले भनेको थिएँ– यिनलाई पनि बिस्तारै कोदो, फापर र आलु खुवाउनुस् । कुपोषण हट्छ । उनी त हाँस्न पो थाले । उनको भनाइ यस्तो थियो– हि हि... तपाईंले पनि के कुरा गरेको ? आलु र फापरले पनि कसरी कुपोषण हट्दो हो ?
आफ्नै पारामा उत्तर दिएका वृषबहादुरको कुराले मलाई रिस पनि उठ्यो । स्थानीय उत्पादनमा स्थानीय जनताको विश्वास नुहुनुका पछाडि त सरकारी कर्मचारीले ल्याउने चामल पो रहेछ !
‘बारीमा फल्ने सिमी, कोदो, फापर, आलु त के राम्रो हुन्छ र ?’ भन्ने भावना मुगुभरि फैलिएकोे छ । गमगढीका होटलमा कोदोको रोटी खान पाइँदैन । कोदो र फापर खाने मान्छे नभेटिने भएकाले उनीहरू आयातित चामल बेच्दा रहेछन् ।
डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठले लेख्नुभएको थियो–कर्णालीको भोक भनेको चामको भोक हो । अर्थात् त्यहीँको स्थानीय बाली प्रयोग गर्ने हो भने किन हुन्छ र खाद्य असुरक्षा र भोक ? तर डा’सापको कुरा कसैले सुनेनन् ।
चामलको मोल जति पर्छ, त्योभन्दा बढी खर्च ढुवानीमा नै हुन्छ । आलु युरोपका विभिन्न मुलुकमा मुख्य खानाको रूपमा प्रयोग हुन्छ भनेर कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नै भन्छ । तर, त्यही आलुलाई कर्णालीमा चाहिँ मुख्य खानाको रूपमा मान्न तयार हुँदैन खाद्य संस्थान ।
खाद्य संस्थानको नाम फेरेर चामल संस्थान राखे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन । किनभने खाद्य संस्थानले कोदो, फापर, मकै आदिलाई ढुवानी गरेर कर्णालीमा खाद्य असुरक्षा गरेको कुरा कहिल्यै सुनेका छौं हामीले ?
कर्णालीका खेतबारीमा, मुस्ताङमा उम्रिने फापर र कोदोको सट्टा चामल कोचाउन चाहन्छ नेपाल सरकार । यो तथ्य कसैले बुझेको छैन, बुझ्न चाहेको पनि छैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३, २०७६, १९:०२:००